MAQAAL: DAD AAN GARASHO & GARAAD LAHAYN – Balcad.com Teyteyleey
MAQAAL: DAD AAN GARASHO & GARAAD LAHAYN
Waxaan nahay ummad ay garashada iyo garaadku ku yar yihiin kaba sii darane aan dareynsaneyn wadciga uu dalku maraayo iyo dhibaatooyinka naga heysta argagaxisada AL-SHABAAB.
Waxay soo qoreen in Madaxweyne Farmaajo uu gefay markuu yiri ”qalinka hala dhigo ee qoriga ha la qaato”, markaasey tusaale u soo qaateen hadal mar hore uu yiri Elman oo kaas ka soo horjeeda.
Intaasi waa garsho xumadi, xagga garaad yarida waxay soo jeediyeen xagee dadkaas mushaar looga keenaa? Waryaa u sheega in laga soo billaabo 1939 ilaa 1945 oo ah muddadii uu dagaalki labaad socday askari mushaar qaatay ma jirin oo waxaa lagu jiray dhufeysyo, cidina ma xasuusan lacag waana meesha ay Somalidu ugu nugushahay oo laga soo galo..qof waliba maskaxdeeda waxaa ku daabacan lacag war kalena ma maqalno.
Taasina waxaa daliil u ah in hogaamiyeyaashi iyo siyaasiyiinti ay Somalidu u aqoonsaneyd inay yihyiin ZUCAMA lagu iibsaday qiimo aad u yar ayna maanta diyaar u yihiin in dalka xataa wareejiyaan mar haddii iyaga la siiyay fara qabsi. Waxaan isku xaqiijinay inaan nahay sidi weyl lo’aad oo la yiri NINKI WARAABSADAA WATA.
Waxaa laga yaabaa dad inuu yiraahdo hogaamiyeyaasha ha isku wada jamcin waayoo waxaa laga heli karaa qaar ka duwan kuwa maanta muuqda…laakin waxaa wadareeyay oraahda Talyaaniga oo dheheysa LA MAGGIORANZA ASSORBE LA MINORANZA.
Waxaan mareynaa marxalad aad u adag oo inta adadag oo wadaninnimo ku beeran tahay oo kaliya ay ka soo bixi karaan QUANDO IL PERCORSO E’ DURO SOLO I DURI RIMANGONO oo micnahedu yahay ”marka meesha la maraayo ay adag tahay dadka inta adadag oo kaliya ayaa ka soo harta”.
The post MAQAAL: DAD AAN GARASHO & GARAAD LAHAYN appeared first on Ilwareed Online.